ဘေဘီလေးအတွက် ဘေးအကင်းဆုံအစားအစာ ဘယ်လိုရွေးမလဲ - Hello Sayarwon
ဘေဘီလေးအတွက် ဘေးအကင်းဆုံအစားအစာ ဘယ်လိုရွေးမလဲ
ဘေဘီလေးတစ်ယောက်ကို ကောင်းမွန်ကြီးပြင်းလာစေဖို့ဆိုတဲ့ ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ထားရသူမေမေ တစ်ယောက်ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒကဘာများဖြစ်မလဲ…….. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝတာကိုကျွေးဖို့ပေါ့။ ဒီလိုရှာပေးဖို့ဆိုရင် ဘေဘီလေးကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစာအာဟာရတစ်ခုဖြစ်ဖို့ လိုအပ်မယ့်လိုအပ်ချက်တွေကို သိဖို့လိုပါမယ်။ ဒီတော့ မေမေ့ရဲ့ ဆန္ဒပြည့်စေဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကနေတဆင့် ဖြည့်ပေးပါရစေလား….
ဘေဘီလေးအတွက် လိုအပ်မယ့်အာဟာရတွေက ဘာတွေများလဲ……….
အကောင်းဆုံးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့ ဘေဘီလေးကို ပြင်ဆင်ပေးမယ့်အစားအစာတွေဲမှာ
ပရိုတင်း– အရိုးနဲ့ကြွက်သားတွေသန်မာစေဖို့၊ ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ နဲ့ ကောင်းမွန်စွာကြီးပြင်းအရွယ်ရောက်လာစေဖို့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
သံဓာတ် – သွေးအားနည်းရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ဖို့ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကောင်းမွန်စေဖို့ နဲ့ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
ကယ်လ်ဆီယမ် -အရိုးနဲ့သွားတွေအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဗီတာမင် C – ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ နဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေကင်းစေဖို့ အရေးပါပါတယ်။
ဗီတာမင် D – ကယ်လ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုအားကောင်းစေဖို့ စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေဖို့ အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင်တစ်ရပ်ပါ။
Omega-3 fatty Acid – ဦးနှောက်နဲ့အမြင်အာရုံအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါ။
ဖောလစ်အက်ဆစ် – ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့နဲ့ အမြင်အာရုံအပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာစေဖို့ အရေးပါပါတယ်။
Prebiotics (အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားအာဟာရ) – ဘေဘီလေးတစ်ယောက်အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေပြည့်ဝစေဖို့ အစာခြေစနစ်က အာဟာရတွေကိုအကောင်းဆုံးစုပ်ယူနိုင်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
အော်ဂင်းနစ်ဟုတ်ရဲ့လား – ကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ပထမ ၅ နှစ်မှာ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေပြည့်ယမှာ အကောင်းမွန်ဆုံးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ ကလေးကို တစ်ခုခုဝယ်ကျွေးမယ်ဆိုတိုင်း သဘာဝအတိုင်းလုပ်ထားတာလား၊ အော်ဂင်းနစ်ဖြစ်ရဲ့လား ပြုပြင်စီမံထားတာမျိုးလားဆိုတာကို သေချာလေး စစ်ပါ။တာရှည်ခံဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတာကို ဝယ်ကျွေးတာက ကိုယ့်ကလေးကို ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခပေးရာရောက်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝအတိုင်းထုတ်ထားတာလားဆိုတာကို သေချာကြည့်ပေးပါ။
သကြားပါဝင်မှု – သ​ကြားက ကလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကိုငယ်စဉ်ကတည်းက သကြားလျှော့ကျွေးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကလေးအတွက် မုန့်ဝယ်တဲ့အခါ သကြားပါဝင်မှုနည်းတာကို ရွေးဝယ်ပါ။
အသားမှုန့်၊ အချိုမှုန့်ပါဝင်မှု– ဒါကတော့ လုံးဝမကျွေးသသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ဘေဘီလေးရဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးအပေါ်မှာ ထိခိုက်စေနိုင်သလို နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေလည်း ရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘေဘီလေးအတွက်အစားအစာရွေးတဲ့အခါ MSG ပါနေတာမျိုးလုံးဝမရွေးပါနဲ့။
အဆီ ဂရုပြုပါ – အဆီဆိုတာနဲ့ ကလေးကိုလုံးဝမကျွေးရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးရဲ့ အမြင်အာရုံ နဲ့ သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကို အကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ နဲ့ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆီတွေပါဝင်အောင်ကျွေးမွေးပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
ဆားပါဝင်မှု – ဆားပါဝင်မှုများတဲ့အစားအစာတွေက ဘေဘီလေးတို့အတွက်မကောင်းပါဘူး။ ဆားများတဲ့အစားအစာတွေက ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဘေဘီလေးရဲ့ကျောက်ကပ်လေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆားပါဝင်မှုများတာတွေကို ဘေဘီလေးမကျွေးမိဖို့ သတိပြုပါ။
တာရှည်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆိုးဆေးတွေ – တာရှည်ခံပစ္စည်းတေါနဲ့ ဆိုးဆေးတွေက အသည်းနဲ့ အစာခြေစနစ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သလို ကျောက်ကပ်ကိုလည်း ပျက်စိးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပစ္စည်းတွေပါဝင်မှုမရှိစေဖို့ကိုလည်းဂရုစိုက်ရပါမယ်။
ထောက်ခံချက်ရထားလား – ဘေဘီလေးတွေစားမယ့်အစားအသောက်တွေက ဘေးကင်းဖို့အရေးအကြီးဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် ဘေဘီလေးအတွက် အစားအသောက်ရွေးချယ်တဲ့အခါ စားသုံးဖို့စိတ်ချရကြောင်း ထောက်ခံချက်ရထားလားဆိုတာကိုလည်း သေချာလေး သတိထားကြည့်ဖို့လိုပါမယ်။
ကုန်ဆုံးရက်ကို စစ်ပါ – ကုန်ဆုံးရက်ကို စစ်ကြည့်ပြီး ကုန်ဆုံးရက်ဝေးတာကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
ကဲ..ဘေဘီလေးလေးအတွက် စားဖို့တစ်ခုခုရွေးပေးတော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို သေချာလေးဂရုစိုက်ပေးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘေဘီလေးဖြစ်အောင် ပျိုးထောင်ပေးနိုင်ကြပါစေကြောင်း……….
6 Tips for Buying Healthy Baby Food https://www.strong4life.com/en/pages/healthy-eating/articles/6-tips-for-buying-healthy-baby-food Accessed Date 13 December 2019
How to Choose the Best Baby Food https://www.parents.com/recipes/baby-food/how-to-choose-the-best-baby-food/ Accessed Date 13 December 2019
Do’s and Don’ts for Baby’s First Foods https://www.eatright.org/food/nutrition/eating-as-a-family/dos-and-donts-for-babys-first-foods Accessed Date 13 December 2019